အတုယူလေးစားစရာ ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး CEO (၅) ဦး - For her Myanmar
အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်သလို တန်းတူ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့သူတွေပေါ့..
နယ်ပယ်တစ်ခုရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အမျိုးသားတွေပဲ ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ?? တကယ်တော့ ဝန်ထမ်းအများကြီးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး CEO တွေ၊ နည်းပညာအသစ်တွေကို တီထွင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု လေးစားချီးကျူးရတဲ့ အမျိုးသမီး သမ္မတတွေ စသဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေကို ရယူထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ကြိုးစားမှုကို အရင်းတည်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ်အမျိုးသမီးတွေလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့… ဆိုတော့ ဒီလို အာဂအမျိုးသမီးတွေထဲကမှ စီးပွားရေးနယ်ပယ် ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီး CEO (၅)ယောက်အကြောင်းကို ယောင်းတို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
(၁) Irene Rosenfeld (Chairman and CEO of Kraft Foods)
Oreo ကို သိတယ်ဟုတ် ယောင်းတို့?? Oreo ဆိုတာက Kraft Foods လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘရန်းတစ်ခုပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Irene Rosenfeld ဆိုတာ Kraft Foods ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဦးဆောင်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး CEO တစ်ဦးပါ။ ငယ်ငယ်ကတော့ Irene ဟာ အမေရိကန် သမ္မတ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံရေး လောကထဲ မဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆုံးမှာတော့ သူ(မ)ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mondēlezရဲ့ ဦးဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ Kraft Foods နဲ့ Irene လက်တွဲခဲ့တာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ Irene က Kraft ကနေထွက်ပြီး Fritso-Lay ရဲ့ CEO နဲ့ chairman အဖြစ် ၂နှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ Kraft ကို CEO အနေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၂မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို Kraft ကို Kraft နဲ့ Mondēlez ရယ်လို့ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတဲ့နောက် နဂိုတည်းက စားသောက်ကုန်လောကမှာထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ Kraft Foods ဟာ သူ(မ)ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ Irene ဟာ ၂၀၁၇ ထိ Mondēlez ရဲ့ CEO အဖြစ် တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) Carol M. Meyrowitz (President and CEO of The TJX Companies)
အဝတ်အစားတွေက စလို့ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေထိ ဘာလိုလို အကုန်ဝယ်လို့ရတဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေက ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့သူတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ Carol M. Meyrowitz ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြောင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး ယောင်းတို့ရေ…
သူ(မ)က ဒီ လက်လီလုပ်ငန်းတွေကနေ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ဖြန့်ချိတာကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်မှာတော့ သူ(မ)ဟာ TJX, Home Goods နဲ့ Marshall’s စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီလို CEO မဖြစ်စဉ်က သူ(မ) ဟာ Saks ရဲ့ လက်ထောက်အဝယ်တော်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ မီလျံနဲ့ချီပြီး ရနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းရဲ့ ရလဒ်ပဲလို့လည်း သူ(မ)က ဆိုပါတယ်။
(၃) Indra Nooyi (Chairman and CEO of PepsiCo)
Indra Nooyi အကြောင်းကို အက်ဒ်မင်တို့ တစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီနော်… သူ(မ)ကတော့ Pepsi ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ စတင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာတော့ Pepsi ရဲ့ CEO ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ စနစ်ကို အသစ်ပြန်လည် ချမှတ်ခဲ့သလို ပက်စီရဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုကြိုးပမ်းခဲ့ရာမှာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကန့်ကွက်ခံရမှုတွေ၊ သဘောမတူမှုတွေလည်း သူ့အနေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပက်စီကုမ္ပဏီကို သူအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီရဲ့ ကြွယ်ဝမှု တိုးတက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း သူမက Forbes မဂ္ဂဇင်း ထဲတွင်စတုတ္တမြောက်အာဏာအရှိဆုံးသူအဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရသလို စီးပွားရေးလောကမှာ အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး၊ ကမ္ဘာမှာ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ၁၀၀ နဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စတဲ့ စာရင်းတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) Ellen Kullman ( Chairman and CEO of E.I. du Pont de Nemours and Company)
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Ellen Kullman ဟာ မာကက်တင်းမန်နေဂျာအဖြစ် DuPont မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ မှာတော့ ကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ မှာတော့ CEO ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ CEO ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ Green Energy တို့ Biotech (ဇီဝနည်းပညာ)တို့လို နယ်ပယ်တွေကို ခြေဆန့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ သူ(မ) CEO အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက် ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာဈေး ၃ဆထိ တက်သွားခဲ့တာက သူ(မ) အောင်မြင်မှုတွေကို သက်သေပြနေတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။
Related Article>>>>ဘတ်စ်ကားထိုင်ခုံနေရာက စတင်ခဲ့တဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီး Rosa Parks ရဲ့ လူမည်းအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှု
(၅) Angela Braly (Chairman,President,CEO Of WellPoint)
ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဦးဆောင်လာတဲ့ Angela Braly ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ မိသားစုဘဝကို မျှတအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရယ်လို့လည်း နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ကလေး ၃ယောက် မိခင်ဖြစ်ပေမဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ Well Point ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသား ၉ယောက်မှာ တစ်ယောက်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေတဲ့ Well Point ဟာ သူ(မ) လက်လွှဲယူပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၀ မှာ အမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၆၀ထိ ခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဘဝ နှစ်ခုလုံးကို ရဖို့အတွက် နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲပေမဲ့ အချိန်ပိုပေးပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်ဆိုတာကလည်း မေမေတို့အတွက် သူ(မ)ပေးတဲ့ အကြံကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ။
ကဲ.. ဖတ်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေ များမလာဘူးလားဟင်?? တကယ်တော့ သူတို့တွေ အားလုံးဟာ ကြိုးစားမှုကြောင့် နေရာတစ်ခုကို ရောက်လာကြသူတွေချည်းပါပဲ ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ်တွေလည်း ကြိုးစားရင် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်…
ယောင်းလေးတို့ အတုယူ အားကျနိုင်ဖို့ မင်မင်ကတော့ သူတို့အကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ပြီ။ အောင်မြင်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဖို့ကတော့ ယောင်းယောင်းတို့ တာဝန်နော်…
Reference Links : Women’s Day, Forbes
အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားတှနေဲ့ တနျးတူအခှငျ့အရေးတှေ ရနိုငျသလို တနျးတူ အလုပျလုပျနိုငျစှမျးလညျး ရှိတယျဆိုတာ သကျသပွေခဲ့သူတှပေေါ့..
နယျပယျတဈခုရဲ့ ထိပျဆုံးမှာ အမြိုးသားတှပေဲ ရပျတညျနိုငျတယျလို့ ဘယျသူက ပွောလဲ?? တကယျတော့ ဝနျထမျးအမြားကွီးကိုအုပျခြုပျနိုငျတဲ့ အမြိုးသမီး CEO တှေ၊ နညျးပညာအသဈတှကေို တီထှငျခဲ့သူ အမြိုးသမီးတှေ၊ ကမ်ဘာက အသိအမှတျပွု လေးစားခြီးကြူးရတဲ့ အမြိုးသမီး သမ်မတတှေ စသဖွငျ့ အရေးကွီးတဲ့ နရောတှကေို ရယူထားတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ကွိုးစားမှုကို အရငျးတညျပွီး ကိုယျနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ နရောကို ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျအမြိုးသမီးတှလေို့ပဲ ဆိုကွပါစို့ရဲ့… ဆိုတော့ ဒီလို အာဂအမြိုးသမီးတှထေဲကမှ စီးပှားရေးနယျပယျ ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီး CEO (၅)ယောကျအကွောငျးကို ယောငျးတို့အတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…
Oreo ကို သိတယျဟုတျ ယောငျးတို့?? Oreo ဆိုတာက Kraft Foods လို့ချေါတဲ့ ကမ်ဘာ့ဒုတိယအကွီးဆုံး စားသောကျကုနျ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဘရနျးတဈခုပါပဲ။ ဟုတျပါတယျ။ Irene Rosenfeld ဆိုတာ Kraft Foods ကိုနှဈပေါငျးမြားစှာ ဦးဆောငျလာခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး CEO တဈဦးပါ။ ငယျငယျကတော့ Irene ဟာ အမရေိကနျ သမ်မတ ဖွဈခငျြခဲ့တယျလို့ ဆိုခဲ့ပမေဲ့ နိုငျငံရေး လောကထဲ မဝငျဖွဈခဲ့တဲ့အဆုံးမှာတော့ သူ(မ)ဟာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စားသောကျကုနျလုပျငနျးတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ Mondēlezရဲ့ ဦးဆောငျသူ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
တကယျတော့ Kraft Foods နဲ့ Irene လကျတှဲခဲ့တာ ၁၉၉၆ ခုနှဈကတညျးကပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈမှာတော့ Irene က Kraft ကနထှေကျပွီး Fritso-Lay ရဲ့ CEO နဲ့ chairman အဖွဈ ၂နှဈဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာတော့ Kraft ကို CEO အနနေဲ့ ပွနျလာခဲ့ပွီး ၂၀၁၂မှာ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံကို Kraft ကို Kraft နဲ့ Mondēlez ရယျလို့ နှဈပိုငျးခှဲပွီးတဲ့နောကျ နဂိုတညျးက စားသောကျကုနျလောကမှာထိပျဆုံးရောကျနတေဲ့ Kraft Foods ဟာ သူ(မ)ရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ ပိုပွီး ကယျြပွနျ့လာခဲ့ပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ Irene ဟာ ၂၀၁၇ ထိ Mondēlez ရဲ့ CEO အဖွဈ တာဝနျယူ ထမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။
အဝတျအစားတှကေ စလို့ အိမျအသုံးအဆောငျတှထေိ ဘာလိုလို အကုနျဝယျလို့ရတဲ့ လကျလီအရောငျးဆိုငျတှကေ ရောငျးဝယျဖောကျကားတဲ့သူတှအေတှကျ ငှကေုနျကွေးကြ သကျသာတဲ့ ပလကျဖောငျးတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာ Carol M. Meyrowitz ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးကွောငျ့ဆိုလညျး မမှားပါဘူး ယောငျးတို့ရေ…
သူ(မ)က ဒီ လကျလီလုပျငနျးတှကေနေ ဈေးနှုနျးသကျသကျသာသာနဲ့ ဖွနျ့ခြိတာကို ၂၀၀၇ ခုနှဈကတညျးက စတငျခဲ့တာပါ။ ဒီနောကျမှာတော့ သူ(မ)ဟာ TJX, Home Goods နဲ့ Marshall’s စတဲ့ လုပျငနျးတှကေို ဦးဆောငျခဲ့ပါတော့တယျ။ ဒီလို CEO မဖွဈစဉျက သူ(မ) ဟာ Saks ရဲ့ လကျထောကျအဝယျတျောအနနေဲ့ ဆောငျရှကျခဲ့တာပါ။ ခုခြိနျမှာတော့ တဈနှဈစာ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ မီလြံနဲ့ခြီပွီး ရနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာ အလုပျကွိုးစားခွငျးရဲ့ ရလဒျပဲလို့လညျး သူ(မ)က ဆိုပါတယျ။
Indra Nooyi အကွောငျးကို အကျဒျမငျတို့ တဈခေါကျ ဖျောပွပေးခဲ့ပွီးပါပွီနျော… သူ(မ)ကတော့ Pepsi ကုမ်ပဏီကို ၁၉၉၄ခုနှဈမှာ စတငျ ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ၂၀၀၁ခုနှဈမှာတော့ Pepsi ရဲ့ CEO ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့လကျထကျမှာ ကုမ်ပဏီရဲ့ စနဈကို အသဈပွနျလညျ ခမြှတျခဲ့သလို ပကျစီရဲ့ စားသောကျကုနျတှကေို ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ စားသောကျကုနျတှေ ဖွဈလာဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုကွိုးပမျးခဲ့ရာမှာ အဖှဲ့အစညျးအတှငျး ကနျ့ကှကျခံရမှုတှေ၊ သဘောမတူမှုတှလေညျး သူ့အနနေဲ့ ကွုံခဲ့ရပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ပကျစီကုမ်ပဏီကို သူအုပျခြုပျခဲ့ပွီးနောကျ ကုမ်ပဏီရဲ့ ကွှယျဝမှု တိုးတကျလာခဲ့တယျဆိုတာကတော့ ငွငျးလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး သူမက Forbes မဂ်ဂဇငျး ထဲတှငျစတုတ်တမွောကျအာဏာအရှိဆုံးသူအဖွဈ ဖျောပွခွငျး ခံခဲ့ရသလို စီးပှားရေးလောကမှာ အောငျမွငျမှုအရှိဆုံး အမြိုးသမီး၊ ကမ်ဘာမှာ လှမျးမိုးမှုအရှိဆုံး ၁၀၀ နဲ့ အအောငျမွငျဆုံး အမြိုးသမီး ၁၀၀ စတဲ့ စာရငျးတှမှောလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၈ ခုနှဈမှာ Ellen Kullman ဟာ မာကကျတငျးမနျနဂြောအဖွဈ DuPont မှာ ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး ၂၀၀၈ မှာတော့ ကုမ်ပဏီကို ဦးဆောငျသူ ဖွဈလာခဲ့ပွီး ၂၀၀၉ မှာတော့ CEO ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ CEO ဖွဈလာပွီးတဲ့နောကျမှာပဲ Green Energy တို့ Biotech (ဇီဝနညျးပညာ)တို့လို နယျပယျတှကေို ခွဆေနျ့နိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ ကုမ်ပဏီမှာ သူ(မ) CEO အဖွဈ ဆောငျရှကျပွီးတဲ့နောကျ ကုမ်ပဏီ ရှယျယာဈေး ၃ဆထိ တကျသှားခဲ့တာက သူ(မ) အောငျမွငျမှုတှကေို သကျသပွေနတေဲ့ အခကျြတှပေါပဲ။
Related Article>>>>ဘတျဈကားထိုငျခုံနရောက စတငျခဲ့တဲ့ လူမညျးအမြိုးသမီး Rosa Parks ရဲ့ လူမညျးအခှငျ့အရေးတောငျးဆိုမှု
(၅) Angela Braly (Chairman,President,CEO Of Well Point)
ကမ်ဘာ့ဒုတိယအကွီးဆုံး ကနျြးမာရေးအာမခံကုမ်ပဏီကို ၂၀၀၇ ခုနှဈကတညျးက ဦးဆောငျလာတဲ့ Angela Braly ကတော့ လုပျငနျးခှငျနဲ့ မိသားစုဘဝကို မြှတအောငျထိနျးနိုငျတဲ့ မိခငျတဈယောကျရယျလို့လညျး နာမညျကြျောပါတယျ။ ကလေး ၃ယောကျ မိခငျဖွဈပမေဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ Well Point ဟာ အရှိနျအဟုနျနဲ့ တိုးတကျလာခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျ နိုငျငံသား ၉ယောကျမှာ တဈယောကျအတှကျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ပေးနတေဲ့ Well Point ဟာ သူ(မ) လကျလှဲယူပွီးတဲ့နောကျ ၂၀၁၀ မှာ အမွတျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး၆၀ထိ ခုနျတကျသှားခဲ့ပါတယျ။ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝနဲ့ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးခှငျဘဝ နှဈခုလုံးကို ရဖို့အတှကျ နညျးနညျးတော့ ခကျခဲပမေဲ့ အခြိနျပိုပေးပွီး လုပျမယျဆိုရငျတော့ ရပါတယျဆိုတာကလညျး မမေတေို့အတှကျ သူ(မ)ပေးတဲ့ အကွံကောငျးလေး တဈခုပါပဲ။
ကဲ.. ဖတျပွီးတော့ အလုပျလုပျခငျြစိတျတှေ မြားမလာဘူးလားဟငျ?? တကယျတော့ သူတို့တှေ အားလုံးဟာ ကွိုးစားမှုကွောငျ့ နရောတဈခုကို ရောကျလာကွသူတှခေညျြးပါပဲ ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျတှလေညျး ကွိုးစားရငျ ဘာမဆို ဖွဈနိုငျတာပဲလနေျော… ယောငျးလေးတို့ အတုယူ အားကနြိုငျဖို့ မငျမငျကတော့ သူတို့အကွောငျးကို ပွောပွလိုကျပွီ။ အောငျမွငျထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှေ ဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားဖို့ကတော့ ယောငျးယောငျးတို့ တာဝနျနျော…
Tags: Career, CEO, Knowledge, life, Motivation, success, Women News, work
Phyu Thant March 19, 2019